चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई अवसर : एलआईसी नेपालले माग्यो कर्मचारी
बैंकिङ खबर । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (एलआईसी) नेपालले झन्डै १० जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मागेको छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट डिग्री होल्डरलाई २ नोभेम्बरभित्र एप्लाई गरिसक्न आह्वान गरिएको छ ।
बैंकिङ खबर । एक किसिमको बचत र लगानी दुवै हो । जीवन बीमा जोखिमहरुको बहन गर्ने वित्तीय साधन पनि हो । बीमा कम्पनीमा जसले बीमा गरेका हुन्छन्, ती व्यक्तिहरुले हरेक वर्ष पैसा बुझाउँदै जान्छन् । यदि ती व्यक्तिहरु जोखिममा परे …
बैंकिङ खबर । ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो प्रथम वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा कम्पनीकोे व्यवसाय बृद्धिमा सहयोग पुर्याउने अभिकर्ताहरुको प्रोत्साहन र सम्मान स्वरुप एजेन्सी अवार्ड्स नाईट २०७५ भव्यताका साथ सम्पन्न गरेको छ । बुढानिल्कण्ठको पार्क भिलेज रिसोर्टमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा …
सुर्या लाइफ इन्स्योरेन्सको हकप्रद बिक्री प्रबन्धकमा एनआईसी एसिया क्यापिटल नियुक्त
बैंकिङ खबर । सुर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले १०ः ७ को अनुपातमा साविकका सेयरधनीहरुलाई जारी गर्न लागेको हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । एनआईसी एसिया क्यापिटल लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झनक …
बैंकिङ खबर । प्रभु लाइफइन्स्योरेन्स लिमिटेडले असोज १८गते विहिवारदेखि पाँच नयाँ शाखा तथा उप–शाखाहरु संचालनमा ल्याएको छ । कम्पनीले महेन्द्रनगर शाखाकार्यालय, बेलौरी उप–शाखाकार्यालय, लम्कीउप–शाखा कार्यालय, फिदिम उप–शाखा कार्यालय तथा ईलाम उप–शाखा कार्यालयहरुको एकैसाथ शुभारम्भ गरी कारोबार सुरु गरेको हो । …
कञ्चनपुरका सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु
कञ्चनपुरका नौवटै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु भएको छ । स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले शुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा बोर्डले यहाँका सबै स्थानीय तहमा कार्यक्रम शुरु गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७४।७५ मा …
प्रभु इन्स्योरेन्स र वयोधा हस्पिटलल्स बिच नगदरहित सम्झौता
बैंकिङ खबर । प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड र वयोधा हस्पिटल्स प्रा.लि. बिच नगदरहित सेवा सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्चित बज्राचार्य तथा वयोधा हस्पिटल्स प्रा.लि.को तर्फबाट महाप्रवन्धक उत्तम थापाले हस्ताक्षर गरे । सम्झौताअनुसार प्रभु …
सिन्धु बिकास बैंक र नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
बैंकिङ खबर । सिन्धु बिकास बैंक लिमिटेड र नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी बीच बैंकास्योरेन्स सेवा सम्वन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशप्रसाद जोशी र इन्स्योरेन्सका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झाले हस्ताक्षर गरे । यस …
प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सले एकै साथ संचालनमा ल्यायो दुई नयाँ उपशाखा
बैंकिङ खबर । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले २०७५ असोज ११गते विहिवारदेखि आफ्ना नयाँ दुईउ प–शाखा कार्यालयहरु संचालनमा ल्याएको छ । कम्पनीले धनकुटा उप–शाखा र अछाम उप–शाखाको एकै साथ शुभारम्भ गरी कारोबार सुरु गरेको हो । धनकुटा नगरपालिकाका मेयर चिन्तन तामाङले …
बैंकिङ खबर । नेपालमा सञ्चालन भएको २१ औं विकासशिल राष्ट्रहरुको बीमा तथा पुर्नबीमा कम्पनीहरुको सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनको दोस्रो अर्थात अन्तिम दिन बीमा पहुँच, बीमामा प्रविधिको प्रयोग र लघबीमाको बिषयमा छलफल भएको छ । बीमा कम्पनीहरुको वित्तीय पहुँचको …
बीमासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा सुरु
बैंकिङ खबर । वित्तीय सुदृढिकरण विपत्त जोखिम वित्तीय व्यवस्थापन र बीमा’ भन्ने नाराका साथ नेपालमा बीमा सम्बन्धी २१औँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु भएको छ । मंगलबार सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बीमामा आकर्षण बढाउनका लागि बीमा गर्ने र दाबी …
स्थापनाको दोस्रो वर्षमा ‘ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स’ : यस्ता छन् , मूख्य उपलब्धीहरु
बैंकिङ खबर । २०७४ असोज ८ गतेबाट औपचारिक रुपमा व्यवसाय सुरु गरेको ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड प्रथम वर्ष सफलताका साथ पुरा गरि दोश्रो वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यो अवधिमा कम्पनीले देशका विभिन्न भागमा ७५ वटा शाखा संजाल बिस्तार …
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गर्नु आवश्यक
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सामाजिक न्याय र समानताको आधारमा थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रले आयोजना गरेको सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी कार्यक्रमका वक्ताले लक्षित वर्गसम्म सो कार्यक्रम पुग्नुपर्ने र सामाजिक न्यायलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्नेमा …
युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सले पूरा गर्यो स्थापनाको पहिलो वर्ष
बैंकिङ खबर । यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले नियमनकारी निकाय बीमा समितिबाट स्वीकृती प्राप्त गरी कारोवार संचालन गरेको असोज ४ गते एक बर्ष पुरा भएको छ । स्थापनाको एक बर्षको अवधिमा प्राप्त गरेको सफलताले अत्यन्तै उत्साहित बनाएको भन्दै कम्पनीले सम्पूर्ण …
बैंकिङ खबर । नेपाल बैंक लिमिटेड्ले आफ्ना ग्राहकको आर्थिक भविष्य सुनिश्चित गर्न थप वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने क्रममा जीवन बीमा सम्वन्धी सम्पूर्ण सेवा उपलव्ध गराउने भएको छ । सम्झौतापत्रमा नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र प्रताप शाह र प्राईम लाईफ …